Awaamiir cusub oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Awaamiir cusub oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya
Awaamiir cusub oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya
Wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Ducaale Islow oo ka hadlay shir saxaafadeed si wadajir ah ugu qabtay isaga iyo taliyeyaasha nabad sugidda iyo booliiska ayaa sheegay in go’aan ay ka soo saareen golaha wasiirada Soomaaliya in taageero dhaqaale la siiyo kooxda Al-shabaab.
Wasiir Ducaale ayaa xusay in ay dambi tahay nooca kasta oo taageero la siinayo kooxda argagaxisada sida ganacsi, siyaasad, qarinta, la xiriirka, niyad u dhisid iyo wixii lamid ah la joojiyay cidii lagu helo ay dambiile u aqoonsan doonto dowladda Soomaaliya.
Dhageyso codka wasiirka.
Taliyaha hey’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, ayaa dhankiisa sheegay in dhaqaale kala duwan ay urruada argagaxisada sida Al-shabaab soo galaan kuwaas oo loogu yeero magacyo kala duwan; sida taakuleyn, Zakawaad, ganaax iyo kuwo kale.
Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in lacagahaas laga qaado cid kasta oo ay dhaqaale ku tuhmaan, waxaana uu tilmaamay in ay ka war hayaan in dadka Soomaaliyeed si joogto ah caga jugleyn ugu hayaan Al-shabaab.
“Waxaan ka war qabnaa baadaas ka sakow, in ganacsato iyo maal qabeeno Soomaaliyeed ilaa xad ku qanacsan fekirka Al-shabaab in ay jiraan, ganacsato iyo dadka kale oo hanti leh in ay si sahlan u taakuleeyaan,” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Dhageyso taliyaha NISA C/laahi Sanbaloolshe.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Janaraal C/xakiim Daahir Saciid Saacid ayaa shirka jaraa’id ka sheegay in laamaha amniga ee dalka ay diyaar u yihiin cidii awaamiirtan jabisa in ay sharciga hor geeyaan.
Janaraalka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka fogaadaan in ay Al-shabaab ku garab siiyaan dhibaateynta ummadda Soomaaliyeed.
Dhageyso taliyaha booliiska oo arintaas ka hadlaya.
Previous articleRa’iisal wasaare kuxigeenka dalka oo lakulmay Hobalada Waaberi
Next articleMadaxweynaha Turkiga oo la filayo in uu safar xal raadin ah ku bixiyo Wadamada Khaliijka